Doorka ay Ganacsatadu Ku leeyihiin Kobaca iyo Horumarka Dhaqaalaha Dalka iyo Shaqo Abuurka | Salaan Media
War-saxaafadeed 26th June 2013
Iyada oo maanta ay tahay maalin taariikhiya kuna weyn dadka reer Somaliland lagana joogo 53 sanno markii Somaliland xornimadeeda qaadatey waxa noo farxad ah in aan idiin soo gudbino war saxafadeedkan kuna saabsan horumarinta dhaqaalaha iyo shaqo abuurista oo la xidhiidha Shirka Qaran ee ku saabsan shaqo abuurista oo dhici doona 1- 2 July.
Waxaa in Muddo ah Dalka Jamhuuriyadda Somaliland kasocotay daraasad Cilmiyaysan oo kusaabsan kobaca ay ganacsatada ka qayqaateen horimarinta dhaqaalaha iyo shaqo abuurista dalka. Daraasaddan oo ah xog laga saaray dhalinyaradda reer Somaliland ee iskood uga qaybqaatay kobcinta dhaqaalaha iyagoo abuuray ganacsiyo kala duwan iyo shaqo abuurisba. Daraasaddan oo uu Gadhwadeen kayahay Eid Ali Salaan oo ah aqoon yahan ku takhasusay dhinaca Dhaqaalaha iyo Tayaynta Bilaa’adamka (Human Resources). Iyo Ahmed Mohamed Alin oo isna ka mida ardayda Sannadka ka bixi doonto kulliyada horumarinta iyo maamulka ee Machadka CSI.
Haddaba Daarasadan ayaan lagu guubaaninayay Dhalinyaradda Jaamacadaha dhigta iyo dadweynaha inay kasoo qayb galaan iyagoo wax badan ka faa’ideysan doona. Waxaa kaloo Daraasadda lagu ifindoona in Dalka Somaliland dhalinyartiisu wax ka qabsan karto, ayna kamaarmi karaan in ay ka Tahriiban Dalkooda hooyo oo Eebaha weyni ku maneystay khayraad faro badan.
Daraasadda moyaane waxa kaloo la soo bandhigi doonaa Film gaaban oo ka waramaya marxaladii Somaliland soo martay iyo wakhti xaadirkan.
Iyaguna waxa hadallo ka jeedin doona Aqoonyahano, Ganacsato iyo Masuuliyiin kasocda Xukuumadda Somaliland waxaana Kamida:
· Wasiiradda xukuumada ee ay khuseyso sida arrimaha shaqo abuurka , qorshaynta /horumarka, dhaqaalaha iyo ganacsiga.
· Gudoomiyaha Bangiga Dhexe ee Somaliland iyo Gudoomiyaha Rugta Ganacsiga ee Somaliland.
· Ganacsato ka midho dhaliyey hamigoodii ganacsi, oo iyaguna ka hadli doona sidii ganacsigoodu ugu hirgalay.
· Hormoodka iyo Maamulayaasha sare ee Jaamacaddaha Somaliland.
Xafladani waxay qabsoomi doontaa:
Taariikhda: 30 June 2013
Wakhtiga: 7:30 am (Subax) Ilaa 12:00 pm (Duhur).
Goobta: Hoolka weyn ee Jaamacada Hargeisa
Wixii Warbixin dheerad ah iyo hadii aad ka soo qeyb galayso xafladan fadlan la soo xidhiidh:
1. Ahmed Mohamed Alin
Email: caalin178@hotmail.com Mobile: 0634474541
2. Saed Abdillahi Hassan
Email:sir_siciid@hotmail.com Mobile: 0634472857